अपराध गरेपछि लुक्न चितवन – Saurahaonline.com
अपराध गरेपछि लुक्न चितवन
चितवन,१० माघ । राष्ट्रियरुपमा चर्चित घटनाका अभियुक्तहरुले लुक्नका लागि चितवनलाई आश्रयस्थल बनाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको चितवन पोष्टमा दिपेन्द्र अधिकारीले खबर लेख्नुभएको छ । । जसलाई श्रृङ्खलाबद्धरुपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
घटना १. गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार समिरमान सिंह बस्न्यात गत महिना चितवनबाटै पक्राउ परे । चितवनमै लुकिछिपी बस्दै आएका उनलाई सीआईबीले चितवनबाट पक्राउ गरी राजधानी लगेर सार्वजनिक ग¥यो ।
घटना २. रुपन्देहीका व्यापारी बलु पौडेलका हत्या आरोपित मध्येका एक नवलपरासी सुनवल–८ बस्ने वर्ष ३६ का पदम चौधरी ५ दिनअघि चितवनकै पहाडी भेग यौउरालीटारबाट गिरफ्तार भए ।
घटना ३. गौचन हत्यामा मुख्य सुटर भनिएका श्याम लामा गम्बे चितवन भरतपुर महानगरपालिका–१३ बाट सोमबार पक्राउ परे । एक हप्तादेखि सीआईबीको टोलीले लामाको पिछा गर्दै आएको थियो । भरतपुरबाट ८ किमि पश्चिममा रहेको बस्तीबाट गुम्बेलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार लामा सार्प सुटर हुन् । अर्का सुटर अमरबहादुर राणा भने अझै फरार रहेका छन् ।
नेपालको सुरक्षा अवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी भएका दुई घटनाका मुख्य आरोपितहरु चितवनबाट पक्राउ परिरहेका छन् । अपराधपछि प्रहरीको आँखा छल्नका लागि अभियुक्तहरुले चितवनलाई सुरक्षित ठाउँका रुपमा लिने गरेको उल्लेखित ३ घटनाबाट पुष्टि हुन्छ । एक महिनाको अवधिमा तीन मुख्य उपलब्धि प्रहरीले चितवनबाटै प्राप्त गरेको छ । तर, चितवन प्रहरी भने अपराधपछि लुक्ने भाग्ने क्रममा चितवनलाई पनि केही दिनको लागि बसाइ क्षेत्र बनाइ परिस्थिति अनुकुल यहाँबाट यताउता लाग्ने गरेको बताउँछ । ‘अरु आरोपित पनि चितवनमै लुकेर बसेको भनी विभिन्न टोली बनाएर खोजी भइरहेको छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने ।
देशको मध्य भाग रहेको र यहाँबाट भारत जानका लागि पनि सहज भएकाले घटना गराएर अभियुक्तहरु चितवन आई लुकिछिपी बस्ने गरेका छन् । ‘एक हप्ता अघि मात्रै गुम्वे चितवन छिरेको भन्ने सूचनाका आधारमा खोजी भइरहेको थियो,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने,‘खोज्दै जाँदा आइतबार भरतपुर–६ गीतानगरमा रहेका उनी सोमबार भरतपुर १३ चम्पानगरबाट पक्राउ परे ।’
प्रहरीलाई छक्याउनका लागि अभियुक्तहरुले रातारात बास सार्ने गरेका छन् । सीआईबीले सबै घटनाहरुको गम्भीरताका साथ सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेकाले आफूहरुलाई यस विषयमा खासै जानकारी नभएको चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक थापाले बताए ।
अपराध गरेर चितवन
चितवन भौगोलिक हिसाबले देशको मध्य भागमा रहेको र यहाँ देशका सबै खाले मानिसहरु बसोबास गर्ने हुनाले पनि गाउँघरमा कहाँ के कस्तो मान्छे आउजाउ गर्छन भनी सधै सोधीखोजी र निगरानी गर्न असमर्थ रहने गरेको एसपी थापाले बताए । शंका लागेको अवस्थामा भने प्रहरीले निरन्तर खोजी गर्ने उनको भनाइ छ ।
चितवनको नारायणगढ पुल्चोकबाट भैरहवा सुनौली हुँदै भारत र वीरगञ्ज रक्सौल हुँदै भारत जान बराबरी दूरी छ । त्यस्तै अभियुक्तहरु चितवनकै माडीबाट पर्सा ठोरी हुँदै पनि भारत नरकटियागंज पुग्ने गरका छन् ।
अभियुक्तहरु कहाँ कहाँ
बलु पौडेल हत्या काण्डका अभियुक्त पदम चौधरी चितवनको विकट मानिने राप्ती नगरपालिका यौउरालीटारबाट पक्राउ परे । चितवनको भण्डाराबाट धादिङ मलेखु निस्कने चेपाङ मार्ग भएर जाँदै गर्दा चौधरी एक्लै पक्राउ परे । समिरमान सिंह यसअघि नै चितवनको सौराहा क्षेत्रबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको थियो । त्यस्तै गम्बे भरतपुरबाट जम्मा ८ किमि पश्चिम चम्पानगरमा आफन्तको घरमा बस्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा, मेघौली, राप्ती नदी आसपासका ठूलासाना होटल तथा रिर्सोटमा अभियुक्तको बास हुने गरेको छ । चितवनमा देशका ७६ वटै जिल्लाका मान्छे बसोबास गर्ने र अभियुक्तहरुको कही न कहीँबाट सम्बन्ध हुने हुँदा पनि आफन्तको घरमा आई बस्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
गौचन र बलुको हत्या
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष व्यावसायी शरद गौचनको असोज २३ गते राजधानीको शान्तिनगरमा गोली हानी हत्या भएको थियो । उनलाई मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले गाडीमा गोली प्रहार गरेका थिए । त्यस्तै बुटवलका व्यवसायी बलु पौडेलेको पुस २१ गते गोली हानी हत्या भएको थियो ।